Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विश्व एड्स दिवस : नेपालमा एचआईभी संक्रमितको संख्या घट्दो – Emountain TV
विश्व एड्स दिवस : नेपालमा एचआईभी संक्रमितको संख्या घट्दो
काठमाडौं, १५ मंसिर । ‘हामी सबैको काम, एचआइभीको रोकथाम’ भन्ने नाराका साथ आईतबार ३२ औँ विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । एक दशक अघिसम्म महामारीको रुप लिने गरेको एचआइभी संक्रमण नेपालमा पछिल्लो समय घट्नुका साथै मृत्युदरमा समेत कमी आएको छ । यस रोगलाई अझै न्यनीकरणका लागि डटेर लाग्न पर्ने सरोकारवालाको बताउँछन ।
संक्रमणको दरलाई घटाउन र एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने दीगो विकास लक्ष्य सहित सरुवात गरिएको विश्व एड्स दिवस आईतबार नेपालमा पनि बिभिन्न जनचेतनामलक कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । सन् २००७ मा नेपालमा वर्षेनी करिव दुई हजार जना नयाँ मानिसमा एचआइभी संक्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा हाल घटेर करिव एक हजार तीन सयलाई मात्रै संक्रमण हुने गरेको छ । नेपालमा २९ हजार ९ सय ९४ जना एचआईभी संक्रमित रहेका छन । जसमध्ये १३ सय ७० जना बालबालीका छन् ।
नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत एचआइभी संक्रमण असुरक्षित यौनसम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने गरेको पाइएको छ । सुईद्धारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, पुरुष समलिगीं तथा तेस्रोलिंगीहरु, रोजगारीका लागि विदेश धाउनेहरु र कैदीहरु लगायतको समूहमा एचआइभी संक्रमणको दर पाँच प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर सामान्य जनसंख्यामा एचआइभी संक्रमण दर एक प्रतिशत भन्दा कम छ । पछिल्लो समय शशक्त कार्यक्रमका कारण पनि संक्रमणदर घटदै गएको सरोकारबालाको भनाई छ ।
सन् २००७ मा नेपालमा रहेका करिव ७० हजार एचआइआभी संक्रमित मध्ये वर्षेनी तीन हजार संक्रमितले ज्यान गुमाउने गरेका थिए । हाल वर्षमा दुई हजार दुई सय ६३ जना संक्रमितले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । संक्रमति हुनेमा अहिले पनि पुरुष नै धेरै छन् । पछिल्लो समय संक्रमणदर घटेपनि अझै पनि संक्रमित सबै खुलेर आउन नसक्दा नियन्त्रणमा चुनौती देखिन्छ ।
पछिल्लो समय संक्रमित ब्यक्तिहरु पनि विस्तारी खुलेर आउने र औषधी नियमित सेवनकालागी आउने गरेकाछन । औषधी नियमित सेवन गरीरहेको संख्या भने १७ हजार ९ सय ८७ रहेको छ ।
श्रीलङ्कन खेलाडीहरुलाई डेङ्गु संक्रमण
नर्सिङका विद्यार्थीद्धारा वार्षिक परीक्षा बहिष्कार
स्वास्थ्य क्षेत्र कमिसनको जालोमा फस्यो : मन्त्री ढकाल
महिनावारीको समयमा हुने भेदभावविरुद्ध पूर्व मिस नेपाल
सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच दुई बुँदे सहमति